Ikhilikithi Archives - Impempe
Sihle Ndlovu Owayengumdlali wekhilikithi wase-Australia nowine iNdebe yoMhlaba kabili naleli lizwe, u-Andrew Symonds, akasekho emhlabeni kulandela ukumbandakanyeka engozini yemoto eQueensland. Izindaba zokudlula emhlabeni kukaSymonds ziqinisekiswe yiCricket Australia (CA) ngeSonto. Ngokusho kwamaphoyisa ingozi yenzeke eHervey Range […]
Sihle Ndlovu UKeshav Maharaj ukhethwe njengomdlali oshaye into ecokeme kwiTest yesibili, nasochungechungeni lwemidlalo emibili iNingizimu Afrika ebiyidlala neBangladesh kuleli. INingizimu Afrika ikhale yemuka nochungechunge lwemidlalo emibili yamaTest, ngemuva kokushaya iBangladesh ngama-run angu-332 osukwini lwesine eSt […]
UKhalala akakhali ngokukhubazeka kwakhe usengumshwini ophambili
April 2, 2022 Impempe.com
Alfred Ngubane USiphelele Khalala uphila nokukhubazeka njengoba engaboni kodwa lokho akumvimbanga ukuthi alandele uthando lwakhe lokudlala ikhilikithi. Kumanje uKhalala ungumshiwibi kumaProteas abantu abaphila nokukhubazeka kanti ukhulume ngokukhethekile neMpempe echaza ngokungena kwakhe kulo mdlalo. “Ngiqale ukudlala […]
Leave a commentEzakamuva, Ikhilikithi
Kuphele kabuhlungu ngamaProteas kwiNdebe yoMhlaba
March 31, 2022 March 31, 2022 Impempe.com
Sihle Ndlovu INingizimu Afrika yenze amaphutha ezingane zisikole ngesikhathi ikhishwa yi-England kwiNdebe yoMhlaba ka-2022, emdlalweni owandulela owamanqamu eHagley Oval, eChristchurch, eNew Zealand. Kulo mdlalo obungoLwesine iqembu laseMzansi ligcine lishaywe ngama-run angu-137, njengoba likhishwe lonke lisenze […]
AmaProteas abesifazane asethubeni lokuqopha umlando
Sihle Ndlovu Iqembu lesizwe laseNingizimu Afrika lekhilikithi labesifazane, lishoda ngokushaya i-England kowandulela owamanqamu, bese liziqophela umlando ngokudlala okokuqala kowamanqamu weNdebe yoMhlaba. IMomentum Proteas ifike kwiNdebe yoMhlaba yamangaza abaningi eNew Zealand. AmaProteas awine imidlalo emine […]